MAPAR : “Tsy hampilamina ny firenena ny hisian’ny kajikajy politika ratsy”
Samy manahy amin’ny mety hisian’ny korontana sy disadisa eto amin’ny firenena na ny antoko politika na ireo fikambanana isan-tokony. 14 février 2018
Amin’ny ankapobeny dia tsy misy afatsy antony iray no heverin’ny rehetra ho mahatonga izany dia ny fisian’ny kajikajy maloton’ny mpitondra ankehitriny manao ny fomba rehetra hifikirana eo amin’ny fitondrana.
Tato anatin’ny roa herinandro nifanesy izay dia nandeha ny tsilian-dresaka fa misy kandidà maromaro tiana hailika mba tsy hilatsaka mandritra ny fifidianana izay ho filoham-pirenena hatao amin’ity taona ity. Araka ny loharanom-baovao voaray dia ahiana hasiam-panitsiana ao anatin’ilay lalàm-pifidianana fa ny olona voalaza fa manana raharaham-pitsarana dia tsy mahazo milatsaka, izay mazava ho azy fa misy tiana kendrena ao anatin’izany. Ankoatr’izay dia voalaza fa hasiam-panitsiana ihany koa ny taonan’ireo mpifaninana afaka milatsaka.
Mahakasika ity farany manokana dia nitondra ny fanehoan-keviny ny vondrona politika avy amin’ny Mapar tamin’ny alalan’ny Razafitsiandraofa Brunel mpikambana izay nilazany fa “sarotra ny hanatanterahana izany satria tsy mampilamina ny firenena. Heveriko fa fotoana izao no tokony handinihan’ny rehetra ary handinihana tsara fa tsy ho baikon’izay kajikajy sy izay eritreritra manokana any fa tokony handinika tsara hoe inona no mahasoa sy mahatsara an’ilay firenena, ary inona no hampilamina ny fiarahamonina malagasy”, hoy ny fanehoan-kevitra noentiny mahakasika ity tetika fanilihana kandidà ity.
Ireo voalaza etsy ambony ireo dia endriky ny kajikajy politika ratsy izay ahiana hiteraka ho any amin’ny korontana tsy hifankahitana raha toa ka mikiry biby manatanteraka izany ihany ireo tompon’andraikitra, araka ny fanahian’ny maro. Eo anatrehan’ny resaka mandeha amin’izao fotoana izao ihany koa izay milaza fa hiara-dia ny filohan’ny tetezamita, Andry Rajoelina sy ny filoha teo aloha Ravalomanana Marc dia nitondra fanazavana hatrany ity mpikambana ao anatin’ny vondrona Mapar ity.
Nambarany fa tokony ny tombotsoan’ny firenena hatrany no jerena eo amin’ny fanaovana politika, ary tsy olona tokana no tokony handidy izany fa ny birao politika mihitsy no miara-mikaon-doha sy miara-manapaka izany. Teny am-pamaranana dia nanamafy ny tenany fa vonona amin’ny fiatrehana ny fifidianana rehetra eto amin’ny firenena ny Mapar.
2018-02-14 09:17:46 par ANDRIAMARO R. Hery
Ny lasa rehetra dia entina hisintonana anatra,Tsy misy Malagasy maniry ny hisian’ny korontana intsony. Any amin’ny fitondrana nefa tompon’ny teny farany. Fotoana izao hanehoana hampisehoan’ny tsirairay ny tena fitiava-tanindrazana marina. Misy ireo efa maneho izany amin’ny alalan’ny hevitra izay entina hampandrosoana ny firenena.
2018-02-14 20:22:26 par 'bordeaux 33000
Aza avela ry zalahy .olona tsy mpanao Politika io filoha notohanan i rajoelina io dia izao no izy hiaraha mahita izao.nianatra resaka finance fa raha resaka hoe lalaana izany tsisy raha hainyy na dia Kelly zalahy eh.tsis raha fantany na kely.fagnamparam pahefana mitondra fankahalana aminy ni hits fa manahy NY tsy hisian ny reglemant de conte fa tsar y nahita filoha TS mahay mitantana karaha ty zalahyeh
2018-02-14 20:24:27 par 'bordeaux 33000
Greve lava zalahy raha hita am hvm ireto ??
Nahazo fandrahonana ny orinasa mpanamboatra lalana any Ambilobe MARARY FO NY HVM (555) 15 mars 2018 Noroahina hivoaka ny lapa ny mpanao gazety, raikitra ny ady saritaka FANDINIHANA LALAM-PIFIDIANANA TENY TSIMBAZAZA (364) 14 mars 2018 Mangataka fialan-tsiny ampahibemaso ny Holafitra FANAMBANIANA MPANAO GAZETY (343) 15 mars 2018 “Hampidinina ho amin’ny antsasany ny vidin-jiro” ANDRY RAJOELINA SY NY IEM (280) 13 mars 2018 Ramatoa iray maty, tovovavy efatra lasa natao takalon’aina FANAFIHAN-DAHALO TAO MAHABO (253) 15 mars 2018 Nolanian’ny malaso tamin’ny lehiben’ny andrimasom-pokonolona ny bala VALY FATY (246) 13 mars 2018